जयनगर–जनकपुर रेल आउन ९० दिन बाँकी, लालबन्दी निजगढ रेलमार्गको टेण्डर हुँदै - Bizkhabar Online
जयनगर–जनकपुर रेल आउन ९० दिन बाँकी, लालबन्दी निजगढ रेलमार्गको टेण्डर हुँदै
बिजखबर संवादाता २०७६ वैशाख २ (April 15, 2019) मा प्रकाशित
काठमाडौं । जयनगर–जनकपुर रेल सेवा ९० दिन भित्र संचालनमा ल्याइने भएको छ । उक्त ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको र अबको ९० दिन भित्र रेल संचालनमा ल्याउने रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिएका छन ।
सरकारले जयनगर–जनकपुर रेलमार्गमा रेल संचालनको लागि केही समय अगाडीनै विभागलाई २ सेट रेल खरिद गर्न रकम उपलब्ध गराई सकेको छ ।
सरकारले भारतीय सरकारी कम्पनी कोकान रेलवेयज कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत २ वटा डीईएमयू रेल खरिद गर्न सो समय लाग्ने भएकाले अवको ९० दिन पछि मात्रै सो रेल मार्गमा रेल संचालनमा ल्याउन सकिने मिश्रले जानकारी दिएका हुन ।
सरकारले उक्त रेलमार्गमा रेल संचालन गर्न जी टु जी प्रक्रियामार्फत ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा २ वटा रेल खरिद गर्नेछ । त्यस्तै रेल विभागले लालबन्दीदेखि निजगढसम्मको रेलमार्गको लागि टेण्डर गर्ने प्रकृयालाई समेत अगाडी बढाएको जानकारी दिएको छ ।
विभागले यस अघिनै उक्त मार्गको टेण्डर गर्ने भनिए पनि जग्गाको मुआब्ज लगायतको काम बाँकी रहेकाले टेण्डरको समय पनि सार्दै गएको थियो । तर अव भने बनको मात्र केही काम बाँकी भएकाले ४÷५ दिन भित्रै टेण्डर निकाल्ने तयारी गरेको मिश्रले जानकारी दिएका छन ।
उनले भने, ‘वातवरणीय प्रभाव मूल्याङकन (इआईए) को काम समेत सम्पन्न भएको छ । अव केही दिनमै टेण्डर खोल्छौं ।’ रौतहट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पहिलो पटक जारी गरेको सुचनाका आधारमा उक्त रेलमार्गमा बस्ती परे पछि पुन बस्तीलाई हटाएको सुचना जारी गरेको थियो ।
उक्त रेलमार्गमा पर्ने बस्तीलाई हटाई विभागले टेण्डर गर्न लागेको विभागले जानकारी दिएको छ । लालबन्दीदेखि निजगढसम्म करिब ४० किलोमिटर रेलमार्गको लागि करिब ६ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने विभागको अनुमान रहेको छ ।
निजगढसम्म रेल पुर्याउन चौथो पटक टेन्डर हुँदै, किन पर्दैन आवेदन ?
लालबन्दी–निजगढ रेलमार्ग टेण्डरको तेस्रो पटक समय थप, पर्ला त आवेदन ?
नेपाल भारत रेल सेवा सम्झौता ५ बर्षका लागि नविकरण, यस्ता छन् १० बुँदे सहमति
रेल तथा पानी जहाज संचालन गर्न १ खर्ब साढे ६३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन, २ बर्ष भित्रै पुर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माण
रेल विभागले भन्यो : आगामी बर्ष पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिँदैन
आगामी बर्ष पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माण सुरु : राष्ट्रपति भण्डारी
लालबन्दी–निजगढ रेलमार्गको टेण्डर खुलाउँदै बिभाग, बन तथा जग्गा मुआब्जको काम अन्तिम चरणमा
लालबन्दी–निजगढ रेलवे ट्रयाकबेल्टको टेण्डर गर्न बाटो खुला, एक हप्ता भित्रै टेण्डर खुलाउने विभागको तयारी
प्रचारप्रसारलाई आफ्नै वेवसाईट बनाउनबाट पछि हट्यो भ्रमण बर्ष सचिवालय, सव–डोमेन मार्फत काम गर्ने तयारी
रोकिएन नेपालीले विदेश गएर गर्ने खर्च, विदेशी पर्यटक मार्फत ६३ अर्ब भित्रिँदा ७३ अर्ब बाहिरियो
नेपाल टेलिकमको सेवाः हालसम्म नेटवर्क नपुगेका स्थानमा पनि फोरजी
बोईङ जहाज बिक्री गर्न आगामी हप्ता ग्लोबल टेण्डर गर्दै निगम, मन्त्रालयले दियो सहमति
मेलम्ची खानेपानीमा सुरु भयो स्थानीयको अवरोध, नयाँ ठेकेदारले गर्न पाएनन् काम
साढे ३ गुणाले बढ्यो शोधनान्तरण घाटा, विदेशी मुद्रा संचितीमा पनि गिरावट
१० महिनामा मुद्रास्फिती बढेर ५ दशमल ३ प्रतिशतमा पुग्यो, खाद्य पदार्थको मूल्यमा उच्च वृद्धि
गौतमबुद्ध विमानस्थल प्राधिकरणले नै संचालन गर्ने, अघि बढ्न सकेन ‘जिटुजी’ प्रक्रिया